Guddoomiyaha Aqalka Sare ‘Xaashi’ oo ka horyimid guddiga uu magacaabay RW Rooble | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Guddoomiyaha Aqalka Sare ‘Xaashi’ oo ka horyimid guddiga uu magacaabay RW Rooble
Guddoomiyaha Aqalka Sare ‘Xaashi’ oo ka horyimid guddiga uu magacaabay RW Rooble
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi cabdillaahi ayaa ku eedeeyay Ra’iisul Wasaaraha XF Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble in uu ka tagay Xubno uu u gudbiyay, kuwaas oo uu doonayay in lagu daro Guddiga doorashooyinka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xalay waxaa uu ku dhawaaqay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee Heer federal, hayeeshee guddoomiyaha Aqalka Sare uu sheegay in xubno uu u gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha laga waayay liiska Xubnaha guddiyada.
War qoraal ah uu soo saaray Khamiistii Maanta guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi cabdillaahi oo la ogeeysiiyay, Madaxweynaha , Ra‘iisul Wasaaraha iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa waxaa lagu sheegay in Xubnaha uu Magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble haddii ay ku jiraan Xubno maamulaya doorashada Xildhibaannada Gobolada Waqooyi aysan ka warqabin, islamarkaana matalin.
Waxay aheyd 8-dii Bishii Oktoober ee sanadkan markii guddoomiyaha Aqalka Sare uu Magacaaabay Xubnaha Gobolada Waqooyi ku matalaya Gudiga doorashooyinka & Gudiga xalinta khilaafaadka, ayaa waxa uu Xubnahaasi uu sheegay guddoomiye Cabdi Xaashi in laga reebay Guddiyada uu Magacaabay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Guddiga uu magacaabay RW Rooble